အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်တို့သည်ထောက်ပံ့ရေးထုတ်လုပ်နှင့်တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကျယ်ပြန့်သို့တင်ပို့ အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် စက်ရုံအတွက်နှင့်အတူ Taiwan ထိုထုတ်ကုန်လည်းဖောက်သည်များနှင့်ကမ္ဘာ၏ clients များကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထောင်အသောင်းရဲ့တိကျတဲ့လိုအပ်ချက်များအတိုင်းစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဤ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောသဗေဒနှင့်တာရှည်ခံအိတ်ထိကပေါက်နှင့်ခါးပတ်ထိကပေါက်၏ရာတွင်, အသင့်တော်ဆုံးပစ္စည်းများ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ, ပန်းကန်ကိုအသုံးပြုပါ။
အသိဉာဏ်ပေါ်သယ်ဆောင်မြင့်မားသောဖိအားစဉ်ဆက်မပြတ်အမြန်ဆေးဆိုးစက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်နှင့်အတူမျိုးဆက်သစ်ဆေးဆိုးစက်. တော်လှန်ရေးသမားဆန်းသစ်တီထွင်မှု,ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ. 65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏. အစွန်းရောက်အနိမ့်နှင့် uni-အရက်အချိုး:၁:2.5~3.5 ရေကိုချွေတာ,ရေနွေးငွေ့,စွမ်းအင်နှင့်ဓာတုပစ္စည်းသုံးစွဲမှုအပြင် ၆၅ ခုထက်ပိုသောရေထွက်ရှိမှု~75%ရိုးရာဆေးဆိုးစက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ. ဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်,အီတလီနှင့်ဂျပန်. ဦး အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,ယူရို,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
အကောင်းဆုံး အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ အပူချိန်ဆိုးဆေးစက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များ ရေသုံးစွဲမှုနည်းသည်&လေထုညစ်ညမ်းမှုနည်းသည် ယူနီဖောင်းဆိုးဆေး အထည်စောင်ရေဖြန့်ဝေ spandex အတွက်တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုသည်ကောင်းမွန်သည် တွန့်တံနှင့်အစွန်းတွယ်မှုကင်းခြင်းတို့ကထိတွေ့မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည် အလိုအလျောက်ဓာတုဆေးထိုးစနစ် အော်တိုသန့်ရှင်းရေးစနစ် အထူးလျှံသုတ်ခြင်းစနစ် နေရာလိုအပ်ချက်သိမ်းဆည်းပါ ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5 ရေကို minimize,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,အလဟ water ဖြစ်သွားသောရေသန့်စင်မှုသည်အလွန်ကျဆင်းသွားသည်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အင်္ဂါရပ်များ နိမ့်အရက်အချိုး ၁:4~7 optional ကို ရွေးချယ်စရာကိရိယာများ စက်ကိုစတင်ရန်နှင့်အရက်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ထိန်းချုပ်ရန်အင်ဗာတာ,ပါဝါစားသုံးမှုကိုလည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏. ရေမီတာကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ရေပူပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ရေတိုင်ကီကိုအပူပေးပြီးစုစုပေါင်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်ချိန်ကိုသက်သာစေသည်. အမွှာ-ဓာတုဗေဒတိုင်ကီသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆိုးဆေးများကိုတစ် ဦး ချင်းစီ ပြင်ဆင်၍ အလိုအလျောက်အစာကျွေးရန်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်. ယိုစီးမှုအချိန်သက်သာစေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှု. တစ်ပြိုင်နက်တည်း Chem,စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်တည်ငြိမ်ကျွေးမွေးသေချာစေရန်နို့တိုက်ကျွေးရေးစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ